Ronaldo oo diyaar garow ugu jira in uu Real Madrid u saxiixo kunturaad cusub – Gool FM
Ronaldo oo diyaar garow ugu jira in uu Real Madrid u saxiixo kunturaad cusub
Kaafi June 2, 2016
(Madrid) 02 Juun 2016. Real Madrid waxa ay u soo bandhigaysaa weeraryahanka heshiis cusub xagaagan.
Ronaldo waxaa lala xiriirinayey in uu dhaqaale xoog leh ugu biirayo midkood Paris Saint – Germain iyo Manchester United 12 kii bilood ee tagay, laakiin waxa uu dhowaan muujiyey sida uu u jecel yahay baaqi ku ahaan shaha Bernabeu.
31 jirka waxa uu ku raaxeystay olole kale oo qurux badan isaga oo dhaafay 50 gool sanadkii lixaad oo xiriir ah waxa uuna ku soo gunaanuday xilli ciyaareedka gool ku laadkii uu ugu shubay Atletico Madrid, kaas oo dhaxal siiyey Champions League.
Wararka El Confidencial waxa ay qabaan in bandhigyadiisa ay Real Madrid ka raarideen in ay heshiis cusub oo qaali ah siiyaan kaas oo lagu qiyaasay €60m oo Euro una dhiganta £46.6m oo Pound waa marka laga reebo canshuuraadka, qandaraaskaas waxa uu naadiga ku sii hayn doonaa ilaa iyo 2020, xilligaas oo uu noqon doono 35 jir.
Ronaldo oo uu iminka kunturaada uu ku jiro ay dhaceyso xagaaga dambe, waxa uu Real u dhaliyey 364 gool 348 kulan oo uu u saftay tan iyo markii uu 2009 uga soo biiray Manchester United.
DAAWO: Tomas Rosicky oo xalay dhaliyay gool cajiib ah!